Q4OS, distro ine dhizaini yeWindows XP kune diki diki | Linux Vakapindwa muropa
Ita kuti Linux desktop iite senge yeWindows Icho chinhu chatova nemakore mashoma ekuberekwa, uye ndechekuti pane imwe nguva zvakaitika kune mumwe munhu kuti izvi zvingave zviri nyore kune vashandisi veiyo inoshanda sisitimu Microsoft shinga kusvika. Uye haisiriyo pfungwa isiriyo, pane kudaro, ndiyo imwezve nzira yekurerutsa shanduko, kunyangwe pachezvangu ini ndinofunga kuti avo vanoshandukira kuLinux vachazviita nekuti vane chokwadi nezvakawanda zvayakanakira, uye vari kudawo kupa kumusoro mamwe maapplication kana mitambo inowanikwa chete yeWindows.
Muboka resarudzo dzinotsvaga kupa izvi isu tine: Q4OS, Linux distro inoita kunge Windows XP inowirirana mune zvakadzama sezvinobvira, kwete kwete mune yayo chete interface asiwo mune zvimwe zvakanangana nenyaya senge windows eiyo yekuisa maitiro, iyo yakafanana neiya yakapihwa sisitimu yekare yeMicrosoft yekushanda, yakatangwa muna Gumiguru 2001 uye iyo munaZvita 2013 yaivepo mumakomputa angasvika mazana mashanu emamiriyoni pasi rese.
Q4OS yakavakirwa paDebian sekugovera uye pa KDE 3.x yedesktop, uye ndezvekuti vashandisi vekare ve desktop ino vanozorangarira kuti kwenguva yakareba pakanga paine kutaura nezve kufanana kwaigona kupa kuWindows, kusvika pakuti kune vakawanda Windows Vista vakauya zvichibva pairi. Icho chokwadi ndechekuti KDE 4 yakashandura zvinhu zvakanyanya, uye pakanga pasina vashoma vashandisi vasina kunzwa kugadzikana nazvo uye vakavaka forogo yeKDE 3.x, inonzi Trinity DE; Mune mamwe mazwi, sezvatinoona, ndiwo mamiriro akafanana neayo eGNOME 3, neGNOME 2 ichipa MATE.
Kunyangwe kuve yakavakirwa paQt, basa rakaitwa kuitira kuti kubva pane iyi vhezheni, GTK-based apps inogona kusanganiswa nenzira yakajeka kwazvo; zvakare zvinodiwa zvehardware zvakadzikira kwazvo, uye Tinogona kuiisa pasina matambudziko pakombuta ine 2 Mhz Pentium 300 processor uye 256 MB ye RAM. uye ichapa zvinopfuura zvinogutsa chiitiko, kunyange ichigona kushanda kunyangwe iine RAM shoma. Kuisirwa kwayo ISO inongobata 309 MB mune iyo x64 vhezheni, uye mune yega yega kuburitswa iyo saizi yakagadziriswa kuti ideredze zvakanyanya sezvinobvira, izvo zvakare zvinotaura nezvekuzvipira kuchengeta Q4OS nguva dzose chiedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Q4OS, distro ine dhizaini yeWindows XP kune diki diki
Chaizvoizvo chinoonekwa hachisi che windows xp, pane chekare, windows 95.
Pindura kuna ken
Laura Lorena Gomez akadaro
Iko kutaridzika kwemawindo 2000 kana iyo yeWindows Xp ine diki diki theme
Pindura kuna Laura Lorena Gómez
Izvo zvekutengesa kana zvakafanana neiyo yeXP, ini ndichaona kana ndichigona kupusisa munhu anowanzo shandisa, ini ndaizongofanira kuisa hofisi yakafanana, kana kuitevedzera kubva pawaini, uye network inowirirana, uye maprinta
Ndaireva windows pane yekutengesa
Ndinoita sei kuti ndiise iko kubaya-bata kweyepadpad yelaptop yangu? Ndine q4OS asi handisi kuwana kumisikidzwa kwakakodzera, zvikasadaro ndinoifarira
Kubata, haibatanidze, handikwanise kuchinja mutauro, ndakaiisa nezuro, nhasi haindibvumidze kupinda, inoti kupinda kwakundikana …… imwe linux iyo m ……
Maitiro ekushandura PDF kuita EPUB ine Caliber